आयराले आफ्नो बुबा आमिर खानको सम्बन्ध विच्छेदको घोषणापछि प्रतिक्रिया दिइन् :- TokhaLive
आयराले आफ्नो बुबा आमिर खानको सम्बन्ध विच्छेदको घोषणापछि प्रतिक्रिया दिइन् :-
टाेखा लाइभ डट कम / असार २१,२०७८
एजेन्सी /आमिर खानकी छोरी आयरा खान सोशल मीडियामा एकदम सक्रिय छिन्। उनी प्राय जसो धेरै पोष्टहरू फ्यानहरूसँग साझेदारी गरिरहन्छिन। जुन उनको प्रशंसकहरु लाई पनि धेरै मन पर्छ। हालसालै, आइराले एक पोस्ट साझा गरेकी छिन जब उनको बुबाको सम्बन्धविच्छेदको खबर आयो।
जसले उसको प्रशंसकलाई अलिकति दुविधा बनायो। यद्यपि आयाराले स्पष्ट प्रतिक्रिया देखाएनन् तर उनले इशारामा केही भनिन्।
आयरा खानले उनको आधिकारिक इन्स्टाग्राम खाता मार्फत स्टोरीमा यो पोष्ट साझेदारी गरेको छ। जसमा उनले आफ्नै तस्वीर साझा गरेको छ। यस तस्वीरको साथ उनले लेखे, ‘भोली अर्को समीक्षा भोली! अब के हुन्छ होला? ‘ यद्यपि आयराले स्पष्ट रुपमा केही भनेनन्, तर अमिरको सम्बन्ध विच्छेदको घोषणा पछि आयराको पोष्ट उनको प्रतिक्रियालाई औंल्याएको देखिन्छ।
आमिर खान र किरण रावको सम्बन्ध विच्छेदको समाचारले उनीहरूको प्रशंसकहरूको मन दुखित बनायो। सम्बन्ध विच्छेदको घोषणा गरेपछि आमिर र किरण राव दुबैले एक भिडियो पनि जारी गरे। यस भिडियोमा, दुबै सँगै हात समातिएको देखिन्थ्यो। उनले यस फ्यानमा उनीहरूका लागि प्रार्थना गर्नको लागि आफ्ना फ्यानहरूलाई पनि माग गरेका छन्। यसैबीच आमिर खानकी छोरी आयरा खानले पनि बुबाको निर्णयप्रति प्रतिक्रिया व्यक्त गरिरहेकी छिन्।
आयरा खान आमीर खानको पहिलो पत्नी रीना दत्ताकी छोरी हुन्। आमिर र रीनाको विवाह सन् १९८६ मा भएको थियो । यस विवाहबाट आमिरका दुई छोरा, छोरी आइरा र छोरा जुनैद छन्। यस पछि उनले सन् २००५ मा किरण रावसँग विवाह गरे। यस विवाहबाट आमिरको एक छोरा आजाद छन्। अब आमिर कान किरण रावबाट पनि सम्बन्धविच्छेद गर्न लागेका हुन् ।